Shan Sababoo Oo Ka Dambeeya Bar-Barihii Kulamadii Ugu Dambeeyay Kooxda Barcelona – Kooxda.com
Home 2018 February Spain, Wararka Maanta Shan Sababoo Oo Ka Dambeeya Bar-Barihii Kulamadii Ugu Dambeeyay Kooxda Barcelona
Shan Sababoo Oo Ka Dambeeya Bar-Barihii Kulamadii Ugu Dambeeyay Kooxda Barcelona
Kooxda Barcelona ayaa la soo yareeyay dhibcihii ay ku haysay hogaanka ee 9 dhibcod ahaa iyada oo haatan 6 dhibcood kaliya kaga haysa kooxda Atletico Madrid kadib laba bar-baro oo xiriir ah oo ay la kulantay.
Kooxda reer Catalonia ayaa wali faa,iido weyn haysata laakiin waxana ayna mar kale samayn karin in ay dhibco lumiso xilli ay ku soo food leeyihiin kulamo buhiim ah.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa 5 sababoo oo keenay in uu hoos u dhoco qaab ciyaareedka kooxda kulamadii ugu dambeeyay.
1.Kulamada badan: Arintan ayaa ah sababta ugu weyn ee lagu sharixi karo sababta hoos u dhigtay qaab ciyaaareedkii fiicnaa ee ay kooxdu ku jirtay maadama ay 12 kulan ciyaareen kaliya 6 isbuuc.
2.Messi & Suarez: Weerarka iyo qaab ciyaareedka kooxda Barcelona ayaa ku tiirsan labada xidig reer South America laakiin labada xiddig ayuuna midkoodna wax gool ah dhalin labadii kulan ee ugu dambeeyay markii ugu horaysay xilli ciyaareedkan.
3.Paulinho & Gooldhaliyayaashii Kale: Xiddiga reer Brazil ayaa ahaa badbaadiyaha kooxda Valverde isaga oo ahaa gool dhaliyaha 3-aad ee ugu goolasha badan laakiin wakhtigii ugu dambeeyay waxa uu si cad uga soomay goolasha isaga oo aan 8 kulan wax gool ah dhalin.
4.Qaybta Dambe ee Ciyaarta: inta lagu jiray xilli ciyaareedkan kooxda Barcelona ayaa inta badan badinaysay ciyaarta qaybta dambe iyaga oo laba u kala jara kooxda ka soo hor jeeda laakiin arintaas ayaan dhicin labadii kulan ee ugu dambeeyay.
5.Saxiixyada Cusub Oo Aan Wali La Qabsan kooxda: Coutinho & Dembele ayaa wali la qabsan kooxda inkasta oo uu Coutinho dhaliyay kulankii Valencia laakiin qaab ciyaareedkiisa guud ahaaneed ayaa u baahan horumar halka uu Dembele u baahan yahay wakhti dheer.